IZhuzhou Ingcono iTungsten Carbide Co., Ltd
Iintambo zeTungsten Carbide
Izixhobo zeMigodi yeTungsten Carbide
Amaqhosha eCarbideAmasuntswana etshizi eCarbideCarbide HPGR studsIingcebiso zeCarbide zokwakhaIingcebiso zeCarbide zejoloji
IiBladi zeTungsten Carbide
Carbide Ball kunye nezihlalo
Iimveliso eziPhezulu ezidumileyo
iintonga ze-carbideImicu yeCarbideHardfacing materialCarbide burrsCarbide diesCarbide mining toolsCarbide bladesTungsten carbide carbide toolsAbasiki bePDC
Iintonga zeTungsten CarbideCarbide burrsIintambo zeTungsten CarbideI-Tungsten Carbide iyafaIzixhobo zeMigodi yeTungsten CarbideIiBladi zeTungsten CarbideAbasiki bePDCCarbide Ball kunye nezihlaloHardfacing material
Umboniso womzi-mvelisoUkufunyanwa kobungcaliIqela lethuFAQ
Iimveliso eziPhezulu ezidumileyoIindaba zenkampani
I-ZZBETTER ikhonza i-PDC cutters, amaqhosha e-carbide kunye neentonga ze-carbide ngaphezu kweminyaka eyi-15. Sinabasebenzi abaqeqeshiweyo kwindawo yokuyila, ukuvelisa kunye nokuthengisa. Bonke abasebenzi bethu baqeqeshwe kakuhle kwaye banamava.
Iintonga ze-tungsten carbide zisisicelo ekwenzeni amasuntswana e-drill, ii-end-mills, ii-reamers, ii-auto cutter ezikhethekileyo, ii-injini ezikhethekileyo zokusika.
Imichilo yeCarbide yeTungsten yoRhwebo idibanisa ukuxhathisa ukubola kunye nokusebenza okuphezulu.
Izixhobo ze-cemented carbide mine zisetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo zamatye, izixhobo zemigodi ezisetyenziselwa ukumbiwa, imigodi, itonela kunye nokwakhiwa.
Umzobo uyafa udla ngokusetyenziswa ukuzoba ucingo, intonga, ibha, kunye netyhubhu.
Malunga neZZBETTERI-Zhuzhou Better Tungsten Carbide Co., Ltd ikwisiXeko saseZhuzhou, kwiPhondo laseHunan, apho eyona ndawo inkulu yokuvelisa i-tungsten carbide e-China. Sinomzi-mveliso okhethekileyo kwi-tungsten carbide, sibonelela nangezinye iimveliso ezininzi esingenako ukuzivelisa. Siyinkampani yokurhweba ngetekhnoloji, sizibophelele kwiimveliso ezizezona ziluncedo kwabo bafuna ukufumana umgangatho olungileyo kunye neemveliso zamaxabiso angcono.※Yintoni ongayifumana kuthi?1. Ii-PDC Cutters2. Izixhobo zeMigodi yeTungsten Carbide3. IiNgxowa zeCarbide zeTungsten / iiBha.Sizimisele ukunika ab...
UMGANGATHO OLUNGILEYOUKWAMKELELA NAKUPHI NA UKUHLOLWA KWEQELA LESITHATHU
ZZBETTER inika impendulo ekhawulezayo kunye nenkonzo ingqalelo. Impendulo kumbuzo wakho iqhutywa liqela lethu elinamava kunye nabaqeqeshiweyo kwiinkonzo ze-intanethi iiyure ezingama-24. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi, nokuba iingcebiso zobuchwephesha okanye nayiphi na ikowuti.
I-Tungsten carbide yabona incam
Umzobo we-tungsten carbide uyafa
K10 K20 K30 K40 Iintonga ze-carbide eziqinileyo ezingenanto kunye nomhlaba
IiBurs ze-Cemented Carbide Blank For Rotary File Flexible Shaft Shank Carbide Burrs
Umzobo weTungsten Carbide Ufela umzobo weTube
umgangatho ophezulu we-carbide strip / ibha / ipleyiti yokusebenzela i-widia tungsten isixhobo sokusika ibha ye-carbide
Izikhonkwane zeCarbide HPGR ezinentloko yePin
Iqhosha leCarbide Parabolic
Ukwembiwa kwamalahle kusebenzisa iPDC cutter Flat PDC amaqhosha
Imicu yemigodi ye-tungsten ye-carbide yenziwe ngesanti yemicu yokutyumza isanti
Ikhadibhodi yebhodi eqotyiweyo yokusika i-tungsten carbide ebhityileyo engqukuva incakuba yokusika imela yokucanda ibhodi etyatyiweyo
copper okanye nickel tungsten carbide composite iintonga welding
Yongeza : I-Huanghe North Road, iSithili saseTianyuan, isiXeko saseZhuzhou, kwiPhondo laseHunan, eChina. 412000
I-imeyile : sales8@zzbetter.com
Ifowuni : 0086 136 4733 8188
Umnxeba : 0086-731-28705418
 Qhagamshelana nathi
 Iintonga zeTungsten Carbide
 Iintambo zeTungsten Carbide
 Izixhobo zeMigodi yeTungsten Carbide
 IiBladi zeTungsten Carbide
IZhuzhou Ingcono iTungsten Carbide Co., Ltd © All Rights Reserved.